Nahavita ny fanazaran’asa i Pasitera RAKOTOMANANA Herintsoa Tahiry – FJKM Ambavahadimitafo Nahavita ny fanazaran’asa i Pasitera RAKOTOMANANA Herintsoa Tahiry |
Nahavita ny fanazaran’asa i Pasitera RAKOTOMANANA Herintsoa Tahiry
RAKOTOMANANA Herintsoa Tahiry dia mpitandrina mpihana-draharaha teto amin’ny fiangonana. Teraka tamin’ny 21 Desambra 1979 tao Ampefy ary manam-bady. Nahazo ny marim-pahaizana Maîtrise en Théologie izy, rehefa nanao fanazaran’asa teto am-piangonana nandritra ny 12 volana ka nanatanteraka ny thèse nitondra ny lohateny hoe :
« Ny fanambadiana kristiana sy ny tontolo ambanivohitra« .
Tamin’ny 02 jolay 2007 tamin’ny 04 ora hariva teny amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga no notanterahina izany thèse nataony izany. Ny vontoatin’izany thèse izany raha fintinina dia ny hoe : Nahoana ny vahoaka any ambanivohitra milaza tena ho kristiana no mijanona fotsiny eo amin’ny vodiondry sy soratra fa tsy miroso amin’ny fanambadiana kristiana any am-piangonana .
Rehefa natao ny fanadihadiana dia roa no anton’izay :
–	Voalohany, tsy tafita ny fampianarana momba ny fanambadiana kristiana
–	Faharoa, noho ny tsy fahatafitan’ny fampianarana izay dia mihevitra izy ireo fa ny fandaniana be amin’ny sakafo sy ny fiara sns… no tena hatao hoe fanambadiana kristiana am-piangonana. Sakana tokoa izay tsy fahatafitan’ny fampianarana izay satria raha ny mpiangona FJKM no resahina dia ny 40% ihany no vita mariazy kristiana fa ny ankoatra izay dia mijanona amin’ny vodiondry daholo any amin’ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara.
Izany thèse izany no nahazoany ny mention Très bien ; ary voatendry izy hanatanteraka ny adidiny maha-mpitandrina azy any amin’ny faritr’i SAVA (Sambava, Anatalaha, Vohémar, Andapa) ao amin’ny Synodam-paritany KRIFAA. Mbola tsy voafaritra moa ny fitandremana. Nafinaritra azy ny fiaraha-miasa teto amin’ny fiangonana satria nahafahany nitondra fampianarana ho an’ny sampana sy ny fiangonana, nefa koa nahafahany nifampizara trai-kefa tamin’izy ireo.
Betsaka ny andrikitra nosahaniny teto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo :
–	Teo ny karazana fanompoam-pivavahana rehetra (alahady maraina, fandraisana, mariazy, maty…) sy ny fandalinam-pinoana samihafa teo anivon’ny sampana
–	Mpitendry organ’ny fiangonana ihany koa izy ary tena mankafy mozika. Anisan’ny tena nanamarika azy ny fandraisany ny mozika Gospel, izay lasa nanjary nikoriana tao aminy ary nanjary niainany sy nohirainy mihitsy.
Izy moa no nanentana sy nitondra ny hafatra tamin’ireo concert Gospel-n’ny Antoko Mpihira Ambavahadimitafo (AMA) tamin’ny Noely 2006 sy ny fanompoam-pivavahana maraina ny Alahady 20 Mai 2007 teo.
–	Anisan’ny zavatra iray nentiny teto amin’ny fiangonana koa ny fahamatorana bebe kokoa amin’ny fanatanterahana asa iray. Ireo raha fintinina fohy no zavatra nifampizarana tamin’i pasitera Tahiry teto amin’ny fiangonana. Efa nandalo teny amin’ny fiangonana Ambohimaharanitra (Mantasoa)izy ; avy eo tao amin’ny FJKM Kristy Fehizoro Andraisoro, avy eo teny Ambohidahy (Manjakandriana) ary farany teto Ambavahadimitafo. Efa nandalina ny Sociologie ihany koa izy ka nahazo ny marim-pahaizana Maîtrise rehefa namoaka ny boky nitondra ny lohahevitra hoe : « Eglise et politique » izay mahakasika ny laïcité de l’Etat, cas du mouvement populaire 2002.
Raha fintinina izany boky izany dia toy izao : nandray anjara betsaka ny fiangonana tamin’ny fiakaran’ny fanjakana ankehitriny. Ilaina mandray anjara ny fiangonana fa tokony hisy « limite » tsy azony hidirana. Nisy sociologue maromaro nojerena tao anatin’izay fikarohana izany.